"एभजोस्कोव" (होटल, सोची): होटेलको बारेमा विवरणहरू, तस्बिरहरू, तस्वीरहरू र पर्यटकहरूको समीक्षा
यात्रा गर्दै, होटल
यदि तपाईंले "एभजोस्कोव" (होटल, सोची) पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुभयो भने, त्यसपछि भर्खरैको खोज नक्सामा तपाई यस्तो संस्था भेट्टाउन सक्नुहुन्न। यो तथ्यको कारण हो कि डिसेम्बर 2014 को शुरुआती समयदेखि कम्पनीले व्यवस्थापन कम्पनीको निर्णयको सम्बन्धमा पुनर्गठन प्रक्रिया चलाएको छ। आधारभूत तत्व निर्माण, जसले इमेटि जिलेको पूर्वाधार निर्माण गरेको छ र त्यहाँ यहा पोर्ट र अपार्टमेन्टको परिसर रहेको छ, त्यहाँ इजेशस्की (होटल) को चार ताराहरु लाई इमेरेनेटिस्की शैलीमा संरक्षण र संरक्षणका साथ सबै दायित्वहरु लाई पुरानो ढाँचामा परिवर्तन गर्न नामकरण गरिएको छ। यसकारण, खोज इञ्जिनमा, चाँडै मात्र होटलको नयाँ नाम रहन सक्छ।
यो होटल ओलम्पिक खेलहरूको लागि बनाइएको थियो
सोचीमा "एभजोस्कोव" (होटल) भर्खरै खोलियो, सेप्टेम्बर 2013 मा यो शहरमा शीत ओलम्पिकको पूर्वमा। यसको कोठा डिजाइनर फर्नीचर प्रयोग गरी बढि सान्त्वना र सुरुचिपूर्ण डिजाइन छ। स्थापनामा कुल कोठाहरूको संख्या 181 मानक कोठा, चौदह डिलक्स कोठा र एक राष्ट्रपति-स्तरको संख्या हो। होटल को मानक कोठा मा एक ठूलो क्षेत्र छ, लगभग 32 वर्ग मीटर, आग अलार्म संग सुसज्जित छ। तिनीहरूको डिजाइन प्रकाश, बेजस्ता-खैरो, खैरो टोनमा छ, मूड लिने मौन पहेंलो सामानले पूरै छ, तर विश्रामको साथ हस्तक्षेप गर्दैन। बेडरूममा एक ठूलो प्लाज्मा टिभी छ।
आधुनिक नलसाजी र सुन्दर रंगहरू
मानक कोठा को स्नानघर, जुन होटल "एवजोस्कोव" (एडलर) को सबै भन्दा आधुनिक बाथरूम फिक्स्चर संग सुसज्जित छ र नरम रेत टन मा सजाइयो, सेतो सामान संग र पनी को तल फर्नीचर। कोठा धेरै प्रकारका शवर जेल, साथै टरी तौलिए, स्नानरोब, चप्पेस प्रदान गर्दछ। मानकको तुलनामा कोठा "लक्स" नम्बरको संख्या 2-2.5 गुणा बढी हुन सक्छ। यहाँ, कुल स्थान निद्रा क्षेत्र र आराम (स्वागत) को लागि अतिरिक्त विभाजन मा विभाजित छ।
कोठाहरू सुत्न सक्छन्
सुत्न क्षेत्रमा बेड बेड टेबल र छेउमा लैंपको साथ एक ठूलो बेड छ। प्राय: गहिरो नीलो-बैजनी टोनमा सजावट गरिन्छ। जीवित कोठा अझ उत्साहित छ। यसमा त्यहाँ एक सोफा, एक टेबल, आर्मचियर जोडी, पर्खालमा एक प्लाज्मा छ। कोठा को यस भाग को सजावट पहेलो को गहरे रंगहरु (कुश्ती को गहना) को अतिरिक्त संग, पीला-बेईज टन मा गरिन्छ, जो संवाद गर्न को लागी, मित्रताहरु संग मित्रता र कठोर संग एक साथ भरा भयो। मानक कोठा र स्वीटहरूको मूल्य सिजनमा निर्भर छ, तर धेरै रूसीहरूको लागि एकदम किफायती छ।
शेक्स यहाँ बस्न सक्थे
अरू र आराम र व्यवसाय सभाका लागि "एभजोस्कोभ" (होटल) को लागी कसले आउन सक्छ? सोचीले यस होटेलको राष्ट्रपतिको मुद्दामा अरब शेकिहरू राम्रोसँग स्वीकार्न सक्थे, यदि यस क्षेत्रको वातावरण अधिक तातो थियो। यस कोठामा बाँच्ने लागत निकै उच्च छ, त्यसैले यो उनका लागि उपलब्ध छ जुन अनुरोधमा चाहानुहुन्छ। कोठामा 130 वर्ग मीटर भन्दा बढी क्षेत्रको कुल क्षेत्र छ र कार्यात्मक रूपमा निद्रा क्षेत्र, एक मनोरञ्जन क्षेत्र र एक वार्तालाप क्षेत्रमा विभाजित छ।
राष्ट्रपति सूट को बेडरूम एक क्लासिक शैली मा काठ को पैनलिंग संग सजाया गएको छ। यो अन्धकार, महान, भूरी-ग्रे टोनमा खिचिएको मा भारी पर्दा र सजावटको मूल बेडडाइड लैंपबाट फाँसिन्छ। यस डिजाइनले तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण बैठक अघि आराम र एकाग्रताको लागि गोपनीयतालाई आवश्यक पार्न अनुमति दिन्छ, जसलाई बिस्तरमा दुई वटा चरणहरू व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
आराम र व्यापार वातावरण
व्यापार क्षेत्र मा राष्ट्रपति सूट को एक कुर्सी तालिका छ जो धेरै कुर्सियों संग, चमडा मा असबाब, एक नरम कालीन मा सेट। व्यापार वातावरण सिर्जना गर्न, लाइट सीधा तालिका माथि माथि तालिकामा राखिएको छ लामो लम्बाई च्याम्पेरियर प्रयोग गरी। तपाईं वार्ता क्षेत्र को बीच अतिथि क्षेत्र मा आराम गर्न सक्छन्, जहां एक सोफे र धेरै आरामदायक कुर्सियां छ, साथै दुई प्लाज्मा पैनलों। स्वाभाविक रूप देखि, कोठा को आग अलार्म र सफल संचालन को लागि सबै संचार संग सुसज्जित छ। साथै कोठा मा एक भोजन कोठा, एक स्नानघर र एक अतिथि शौचालय छ। कोठाको सञ्झ्यालबाट, सम्भवतः कोकेशस पर्वत र कालो समुद्र तटको सबैभन्दा राम्रो दृश्य।
नि: शुल्क व्यवसायका व्यक्तिहरूको लागि राम्रो आवास
अरू के रोचक होटल "एभजोस्को" (सोची) के हो? क्षेत्रमा "तटीय क्वार्टर" वा "सागर क्वार्टर" अपार्टमेन्टहरू दुवै मनोरञ्जन र दीर्घकालीन निवासको लागि उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ। उदाहरणको लागि, एक कोठा कोठामा "सागर क्वार्टर" मा तपाइँ 1000 रूबल प्रति दिन (वा प्रति महिना 25 हजार रूबलहरू) को लागि एक साथ बस्न सक्नुहुन्छ।5बर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू यहाँ निःशुल्क,6देखि 12 बर्षका बच्चाहरू र वयस्कहरू, एक अतिरिक्त ठाउँमा 300 रूबलका लागि यहाँ बाँच्न सक्छन्। प्रति दिन। यदि तपाईं भान्साको साथ 40 मिटरको आकारको कोठामा भाँडामा लिनुहुन्छ, तब एक महिनादेखि बाँच्न रुचाउँछन्29292रुबल, जुन रूसी शहरहरूमा घर भाडामा लिने खर्च भन्दा कम छ। यसैले, होटल "एवेजोस्कोस्की", सोचीले नि: शुल्क व्यवसाय (कलाकारहरू, प्रोग्रामरहरू, लेखकहरू, व्यवसायीहरू, सख्त कार्यकारी कार्यक्रम र कामको स्थानसँग जोडिएको) को लागी किफायती मूल्यहरूमा अपार्टमेन्टको सहज अवस्थामा बाँच्नको लागि अवसर प्रदान गर्दछ।
तपाईं सस्तो ठूलो कम्पनीमा बाँच्न सक्नुहुन्छ
"तटीय तिमाही" मा अपार्टमेन्टहरूले 4-कोठा अपार्टमेन्टमा एक ठूलो कम्पनीका साथीहरूलाई एक महिनाको 52 हजार रूबलका लागि 120 वर्ग मीटरको कुल क्षेत्रफल (एक लामो समय भाडाको लागि भान्साको साथमा) रहने मौका दिन्छ। यहाँ6मुख्य स्थानहरू छन्, र अतिरिक्तहरू स्थापित गर्न सकिन्छ। प्रत्येक कोठामा (मूल्यमा समावेश छ) Wi-Fi, उपग्रह टिभी, पार्किङ सेवाहरू, सोची पार्कमा स्थानान्तरण र एडलरको केन्द्रमा छ। यसबाहेक, धेरैले बच्चालाई क्लबको लागि सुविधाजनक बनाउनेछ, जहाँ बच्चाहरु4बर्ष भन्दा पुरानो हुन सक्छन्, आमाबाबु बिना, जो कि बालवालिकाको केहि अनुरुप हो। अपार्टमेन्टमा "एभजोस्कोव" (होटल 5, सोची होटल) त्यहाँ एउटा बेड (डबल वा धेरै सिंगल सिंगल बेड), तालिकाहरू, क्याबिनेटहरू, बिडिड टेबलहरू, लैंप, एअर कंडीशनर, मिनी फ्रिज, इलेक्ट्रोनिक ताला, टाइटिनरीजहरू, तौलियाहरूसँग सुरक्षित छन्। लिनको परिवर्तन तीन दिनमा एकपटक बनाइन्छ।
जसको लागि आर्थिक संकटले ठूला ठूला ठूला शहरहरुमा साना बच्चाहरु संग महँगो आवास को लागि महंगी आवास भाडा दिदैन, सोची को "एवजोस्कोव" होटल मा रहन को लागि एक अवसर हो। अपार्टमेन्ट "सागर क्वार्टर", 2014 ओलम्पिकको चैंपियनको पूर्व निवास भएको, 52 देखि 121 वर्ग मीटर सम्म कोठामा आवास प्रदान गर्दछ। मीटर (2-4 मुख्य ठाउँहरू र 300 रुबल प्रति दिनको लागि थप आवासको संभावना) क्रमश: 35 देखि 60 हजार प्रति महिना, प्रति महिना।
अपार्टमेन्टका कोठाहरूमा के छ
अपार्टमेट्स को कोठा पूर्व-स्थापित वाई-फाई, टिभी छ, मूल्य मा सोची पार्क र एडलर को स्थानांतरण पनि शामिल छ। "सागर तिमाही" मा प्रत्येक अपार्टमेन्टमा एक भान्सा मड्यूल छ, जसमा फ्रिज, सिंक, विद्युत् स्टोभ, भान्साको पोल एक सेट छ। यसको अतिरिक्त, कोठाहरुमा आवश्यक फर्नीचर, एयर कंडीशनिंग, वाशिंग मिसिन र ड्रायर, हेअर ड्रायर, फलाम र इस्त्री बोर्ड छ। दोस्रो फ्लोरमा र माथिको अपार्टमेन्टहरू एक लजिकियासँग फर्नीचर छ (2-3-बेड कोठाका लागि)। यस क्षेत्रमा4वर्ष भन्दा बढी उमेरका बच्चाहरुका लागि बालबालिकाको क्लब हो (आमाबाबु द्वारा असक्षम)।
Aivazovsky होटल (सोची होटल) को बारे मा के हो, जसको फोटो माथि उपस्थित छ? यसमा बाँच्न वा नजिकैका अपार्टमेन्टहरूमा सस्ती मूल्यहरू भन्दा बढी सिफारिश गरिन्छ ती सबै को साथमा सबट्रोपिक्स र उत्तर ध्रुव दुवै भ्रमण गर्न चाहन्छन्। यहाँ तपाईं क्रिसियाया पलितालाना मा स्कीइङ जान सक्नुहुन्छ, जुन होटलबाट 50 मिनेट छ र त्यसपछि समुद्रमा र सिजनमा फेरि स्कीइङ जान्छ, तर केवल पानी।
हामी सोची मा बस्ने परिवारहरु लाई पठा्नुहोस। सस्तो, तर धेरै उपयोगी
यसको अतिरिक्त, सोची लामो समयदेखि यसको उपचार वायु, अमीर ओजोन, फाइटटनसेप्स, समुद्री लवणको लागि जानिएको छ। सोचीको मौसम आराम र मनोरञ्जनको लागि सबै वर्षको लागि अनुकूल छ, जस्तै सर्दमा तापमान 6-7 डिग्री भन्दा कम छ, र गर्मीमा यो लगभग 25-30 रहन्छ। यो क्षेत्रमा स्विमिंग सीजन जूनमा खोलियो, र तपाईं लगभग अक्टोबरको अन्त्य सम्म तैर्न सक्नुहुन्छ। - नोभेम्बरको सुरुवात। यसैले, व्यवसायीहरूले आफ्ना गैर-कामदार पत्नीहरूलाई युवा बच्चा वा आमाबाबुले होटल "एवेजोस्कोस्की" ("इमेरेटिस्की") मा अपार्टमेट्स पठाउँछन्, जहाँ आवास महोत्सवको तुलनामा शायद सस्ता हुन्छ, उदाहरणको लागि, राजधानीमा, र लाभहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। मस्को धुम, श्वसन मार्गमा हानिकारक। चाँडै सुत्न, अपार्टमेट्सको संख्या सीमित छ जस्तो।
होटलमा इन्फ्रास्ट्रक्चर र अतिरिक्त सेवाहरू
सोचीमा "एभजोस्कोव" होटल, जसका समीक्षाहरू सकारात्मक छन् र पाँच-बिन्दु मापनमा दसवटा बिन्दुमा4अंक वा 8.3 बिन्दुहरू छन् (विभिन्न प्रणालीहरूमा), आफ्ना अतिथिहरूलाई उच्च गुणस्तरको विकसित आधारभूत संरचना प्रदान गर्दछ, जसमा दुई रेस्टुरेन्टहरू, वीआईपी-हल्स, लबी पट्टी, विभिन्न व्यवसायीको सम्मेलन हल, व्यापार वार्ताका लागि कोठाहरू। होटल को इनडोर र इनडोर स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, स्पा र व्यायामशाला, स्पा छ, जहां महिलाहरु को एक प्रसाधन सामग्री, मेकअप कलाकार, कपाल को छेड़छाड़, मालिश आदि को उपयोग गर्न सक्छन् .साथै, होटल विदेशी नागरिकों को लागि वीजा समर्थन प्रदान गर्दछ, दरबार, दूत, कोठा प्रदान गर्दछ सामानको भण्डारण, लाँड्री, ड्राई क्लीनिंग, एटीएम सेवा र सबभन्दा सानो अतिथिहरूको लागि विशेष बिटहरूको लागि। आगन्तुकहरूले उच्च गुणस्तरको सेवा, कोठा, भूनिर्माण, राम्रो विचार, शान्ति र ठाँउको शान्त, सफा हावा, प्रभावकारी सूर्यकोट बनाउने सम्भावनाको सुदृढता र राम्रो ध्वनि इन्सुलेशनलाई उल्लेख गर्यो। नकारात्मक क्षणहरूको, यो शायद नै नै उल्लेख गरिएको छ, तर wi-fi मुठभेडको अस्थिरता।
सान मारिन होटल 4. विवरण, समीक्षाहरू
सन बे होटल4* (मार्मारिस, टर्की): पर्यटकहरूको विवरण र समीक्षा
प्रीमियम ग्रैंड होरिजन रिजर्ट4*, मिश्र, हर्गाडा: पर्यटकहरु को समीक्षा र फोटो
Evabelle Napa Apts Class A4- फोटो, मूल्यहरू र रूसबाट पर्यटकहरूको समीक्षा
Wbp प्लाईवुड - यो के हो? पानी प्रतिरोधी प्लाईवुड wbp
टओिस्म: छोटकरीमा मुख्य विचारहरू। प्राचीन चीन को एक दर्शन रूपमा टओिस्म
Shuya, इभ्यानोभो क्षेत्र। इभ्यानोभो क्षेत्र शहर
को भारित औसत मूल्य - यो के हो र यो कसरी गणना गरिन्छ?
भिटामिन "समय कारक": प्रयोग, मूल्य, र समीक्षा लागि निर्देशन
Basilisk: पौराणिक कथाहरु र लोकप्रिय संस्कृति
मित्रता बारेमा बुद्धिमानी वचनहरू। मित्रता बारेमा वचनहरू
विभिन्न संस्कृति मा "एक scythe संग मृत्यु" अर्थ टाटु